🥇 ▷ Sawirrada Google waxay bartaan akhriska waxayna awood u yeeshaan raadinta qoraallada ✅
Sawirrada Google waxay bartaan akhriska waxayna awood u yeeshaan raadinta qoraallada
Waxaan horay u soo sheegnay dhowr jeer inta aan jecel nahay sawirrada Google. Ka fog in aad noqoto barnaamij maktabad, Google inta badan waxay ku darsataa muuqaalo cusub oo ka dhigaya mid qiimo leh. Midka ugu dambeeya waa mid cajiib ah, wuxuuna sii xoojiyaa awooda madal.
Sawirrada Google ayaa durba awood u leh inay ka helaan qoraallada sawirradaada
Sawirrada Google waxaa loo qaatey sidii codsi diiradda lagu saaray keydinta matxafkayaga dijitaalka ah oo dhan. Tan waxaa lagu gaadhay Google oo bixisay kaydinta tayadeedu sarrayso, oo bilaash ah oo aan xad lahayn. Mar haddii yoolkaas la gaaro, oo leh muuqaal noocaas oo kale ah sawirro cusub ayaa loo baahnaa. Sababtoo ah ma jiraan wax ka badan jahwareer badan irbad ka raadi meesha joodariga ah.
Awoodaha dadku ay ka soo qaateen Sawirrada Google ayaa ugu dambayntii gaadhay dalal badan Waxaan ku tusinaynaa sida loo helo albums-yada dadka ee Sawirrada Google, ee bilaabaya inay yimadaan Yurub. Anaguna waxaan ku baraynaa inaad ka shaqeyso.
Iyada oo ku saleysan sirdoonka macmal, Google ayaa u suurta gelisay mashiinka raadinta inuu garto waxa ku jira sawir kasta. Haddii sanduuqa raadinta aan ku qorno baabuur, sawirro aan soo galnay oo ay jiraan gawaarida ayaa ka soo muuqan doona. Isla cuntada, xeebta, eeyaha ama wax kasta oo aad ka fikiri karto. Xitaa dhawaan, aaladda is-sheegta dadka sida noocyada ah ayaa soo gashay Yurub.
Si kastaba ha noqotee, marwalba waxaa jira fursad lagu sii wanaajiyo, taas darteedna waan u helnaa wararkii ugu dambeeyay Taasi waxay gaadhay dalabka. Hadda laga bilaabo, Sawirrada Google waxay yaqaanaan sida loogu raadiyo qoraallada sawirradeenna, aad bayna u shaqeysaa.
Haddii aad cusbooneysiisay dalabka, kaliya ku qor khaanadda raadinta qoraalka aad rabto inaad raadiso iyo sawirro ayaa ka dhex muuqan doona oo qoraalku u muuqdo.
Mar haddii la helo, haddii aan riixno badhanka Google Lens-ka waxaan sameyn karnaa waxyaabo sida fudud u ah doorashada qoraalkaas iyo ka koobiyeynta, raadinta internetka ama toos u turjumaadda turjumaanka.
Waa in la ogaadaa in qoraalka raadinta aan wali si ku filan loo wanaajin, mararka qaarna waxaan la kulannay qoraal ah, in kasta oo Lens uu awood u lahaa inuu aqoonsado, raadinta ma aysan ahayn. Waxay noqon doontaa wax waqti ah kahor inta Sawirrada Google ay baran inay wax akhriyaan si sax ah.
Sawirrada Google Nooca: Qoraaga: Waxaa loo baahan yahay GUDAHA GUDAHA INSTALL APK Cabbirka: